Tallaalida Dhallinyarada | Washington State Department of Health
Tallaalka COVID-19 waxaa heli kara dadka jira 5 sano iyo kuwa kasii wayn. Dhallinyarada jira 5 illaa 17 sano waxaa kaliya oo ay qaadan karaan tallaalka Pfizer. Majiro talaalka COVID-19 oo kale oo loo oggolaaday inay qaataan dadka ka yar 18 sano waqtigaan.
Qaadashada canugaada ee tallaalka ka dhanka ah COVID-19 waxa uu:
Ka caawin karaa hoos udhigidda halista kasoo gaareysa COVID-19
Yareyn karaa fursadii ay si aad ah ula xanuunsan lahaayeen, haddii uu ku dhaco COVID-19
Yareyn karaa fursadii in isbitaalka la dhigo waxa uuna hoos u dhigaa halista ah in ay u dhintaan COVID-19
Ka caawiyaa kahortagidda inuu kudhaco noocyada cusub ee COVID-19
Kordhiyaa tirada dadka ka dhawrsan inuu kudhaco COVID-19 —taas oo adkeyneysa in xanuunku sii faafo
Yareeyaa carqaladeynta waxbarashada tooska ah iyo waxqabadyada isaga oo ka caawinaya xakameynta isugudbinta COVID-19 ee bulshada dhexdeeda
Carruurta jirta 5-11 sano
Qiyaas ahaantii 3,100 oo ah carruur jirta 5 illaa 11 sano (kaliya ah Ingiriisi) ayaa qaatay tallaaka Pfizer ee COVID-19 inti lagu jiray tijaabooyinka caafimaadka. Majirin waxyeello ka dhalatay oo halis eheed oo lagu ogaaday daraasada gudaheeda, taasoo wali socota.
Jawaab celinta difaaca jirka ee carruurta da'doodu udhaxeyso 5 illaa 11 sano waxay la mid ahaayeen kuwa da'doodu udhaxeyso 16 illaa 25 sano.
Tallaalka ayaa kudhawaad 91% waxtar u lahaa kahortagidda COVID-19 ee carruurta jira 5 illaa 11 sano.
Carruurta jirta 12-15 sano
2 260 oo ah kaqeyb qaatayaasha jiro 12 ilaa 15 sano (kaliya ah Ingiriisi) ayaa iska diiwaangeliyey tijaabada caafimaadka ee ah habka xakameynta isku barbardhigidda waxyeellada lahayn ee ooga socota si aan kala sooc lahayn gudaha Mareykanka.
Kuwaan waxaa kamid ah, 1 131 oo ah kaqeyb galayaasha qaangaarka ah ayaa qaatay tallaalka halka 1,129 ay qaateen tijaabada ah milanka cusbada. In kabadan kala bar kaqeybgalayaasha ayaa lala socday badqabkooda ugu yaraan labo billood kadib qaadashadooda kuurada labaad.
Tallaalka Pfizer ayaa loo heli karaa ilmaha da'doodu udhaxeyso 5-15 sano si ah Emergency Use Authorization (EUA, Oggolaanshaha U-Adeegsiga Xaaladaha Degdegga), waxaana si buuxda loogu fasaxay kuwa jira 16+.
EUA waxa ay u oggolaaneysaa Food and Drug Administration (FDA, Maamulka Cuntada iyo Daawooyinka) inay sameyso tallaal diyaar u ah marki lagu jiro xaalad degdeg ah oo lagu dhawaaqay kahor inta aan si buuxda rukhsad loogu siin. Ujeedada oggolaanshaha u-adeegsiga xaaladaha degdegga ah waa in la xaqiijiyaa in dadka qaadan karaan tallaalo nolosha badbaadiya kahor falanqeynta wakhtiga-fog ee xogta. EUA wali waxa ay ubaahan tahay inay dib-u-eegis xoog leh kusameyso xogta caafimaadka—wakhti muddo gaaban ah.
Wixi EUA ah oo ay bixisay FDA waxaa si dheeraad usii baara Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada) ee kuwa uqaabilsan Advisory Committee on Immunization Practices (Guddiga La-talinta ee Habdhaqanka Tallaalka) (kaliya ah Ingiriisi) iyo Western States Scientific Safety Review Workgroup (Koox -hawleedka Dib -u -eegista Badbaadada Sayniska ee Gobolada Galbeedka).
Su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan Waalidiinta iyo Mas'uuliyiinta
Maxaan ooga walaacayaa inuu canugeygu kudhaco COVID-19?
Tan iyo billoowgii musiibada caabuqa, in ka badan 12 milyan oo caruur ah oo kunool Mareykanka ayuu ku dhacay COVID-19. Noocyada cusub ee COVID-19 ayaa aad halis ugu ah kuna faafa dhalinyarada marka loo barbardhigo noocyadii asalka ahaa waxayna noocyadaan cusub ee COVID-19 sababeen isbitaal dhigis aad u sareysa oo xagga dhalinyerada ah.
Iyadoo COVID-19 uu khafiif u yahay carruuta marka loo eego dadka waaweyn, haddana caruurta ayaa sidoo kale aad ula xanuunsan kara oona ku faafin kara saaxiibadooda iyo qoyskooda kuwaas oo difaaca jirkoodu liito ama siyaabo kale u nugul.
Carruurta uu kudhaco COVID-19 ayaa yeelan kara “COVID-19 daba dheeraaday” ama astaamaha joogtada ah kuwaas oo ay badanaa kujiraan maskax falluuq, daal, madax xannuun, cajis iyo neef qaadashada oo ku adkaata. Tallaalku waa habka ugu fiican ee looga dhigayo carruurta kuwa caafimaad qaba oo badbaadsan.
Carruurta uu kudhaco COVID-19 waxaa laga yaabaa in ay halis weyn ugu jiraan Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C, Caabuqa habdhisyada kala duwan ee jirka carruurta) (webseed kaliya ah Af-Ingiriisi). MIS-C waa xaalad halkaasoo qeybaha kala duwan ee xubnaha jirka ay noqon karaan kuwa leh caabuq, oo ay ku jiraan wadnaha, sambabada, kelyaha, maskaxda, maqaarka, indhaha, ama xubnaha mindhicirada caloosha. Iyadoo wali aan la ogeyn waxa sababa MIS-C, carruur badan oo qaba MIS-C ayaa qabay COVID-19, ama ka agdhawaa qof qaba COVID-19. MIS-C ayaa halis noqon kara, xitaa dhimasho keeni kara, laakiin badanaa carruurta laga helay xaaladaan ayaa kasoo boqsaday markii ay heleen daryeel caafimaad.
Tallaal miyaa looga baahan yahay ardada K-12 ee gelitaanka dugsiga?
Ma inaan bixiyaa kharashka tallaaka?
Maya, Canugaadu waxa uu ku heleyaa tallaalku si bilaash ah. Dowladda federaalka ayaa bixisa kharashka buuxa ee tallaalka.
Haddii aad leedahay caymiska caafimaadka dawliga ah ama mid gaar ah, bixiyahaaga adeegga tallaalka ayaa kharash dul saarayo si dib loogu magdhabo khidmadda maamulidda tallaalka. Haddii aadan lahayn daboolid caymis, dawlada federaalka ah ayaa bixisa barnaamij oo bixin doona kharashka bixiyaha tallaalka si laguu siiyo tallaalkaada.
Waa in aan lagaa qaadin kharash jeebkaada ah ama waa inaadan warqad biil ah ka helin adeeg-bixiyahaaga khidmadda maamulidda tallaalka COVID-19, Tani waxay sidoo kale khuseysaa dadka qaba caymiska gaarka ah, Apple Health (Medicaid), qaba Medicare, ama aan caymis ku jirin.
Waa maxay waxyeelada badanaa ka dhalata qaadashada tallaalka COVID-19 ee carruurta?
Khatarada caafimaadka ee soo gaaraya carruurta haddii uu kudhaco COVID-19 ayaa aad ooga badan halista waxyeelada kasoo gaarta qaadashada tallaalka.
Sida tallaalada kale, waxyeelooyinka ugu badan ee tallaalka waxaa ka mid ah meesha la durey oo xanuunta, daal, madax xanuun, iyo murqo xanuun. Astaamahaan badanaa waa kuwa iska fudud.
Tijaabooyinka Caafimaadka (kaliya ah Ingiriisi) carruur badan ayaa soo tabisay in saameynta ka dhalata tallaalka kadib kuurada labaad ay kabadan tahay marka loo fiirsho kuurada koobaad Waxyeelada kadhalata tallaalka waa mid guud ahaan udhaxeysay khafiif illaa dhex-dhexaad xagga halis ahaanta waxa ayna dhaceen labo maalmood gudahood kadib qaadashada tallaalka, inta badana waxa ay ku baaba'een hal maalin ilaa labo maalmood gudahood.
Waa maxay maadooyinka ku jira tallaalka Pfizer?
Maadooyinka ku jira tallaalka Pfizer waa kuwo caadi u ah talaallada. Talaalku waxaa ka kooban yahay maadooyinka firfircoon ah ee mRNA oo ay la socdaan maadooyin kale sida dufan, cusbo, iyo sonkor oo difaacaaya maadada falgalka samaynaysa, kana caawinaaya inay jirka si fiican ugu shaqayso, difaacaayana tallaalka inta la kaydinaayo iyo marka la safrinaayo.
Tallaalka Pfizer maku jiro wax kamid ah jir dadeed (oo ay ku jiraan unugyada ilmaha uurka ku jira), fayraska COVID-19, leexada caanaha, waxyaabaha cuntada qurmidda kadhawra, ama maadooyinka kale ee noolaha ayna ku jiraan maadooyinka hilibka khaansiirka ama gelatin. Tallaalada laguma koriyo ukumaha dhexdooda mana kujiraan wax waxsoosaar ukun ah.
Eeg S&J; bogga webseedka ee Children's Hospital of Philadelphia (Isbitaalka Carruurta ee Philadelphia) (kaliya ah Ingiriisi) haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo kusaabsan maadooyinka kujira.
Waakee nooca tallaalka uu canugaygu qaadan karo?
Tallaalka COVID-19 ee Pfizer-BioNTech (Pfizer) waa midka kaliya loo fasaxay carruurta da'doodu tahay 5 illaa 17 sano. Ma jiro tallaal kale oo COVID-19 ah oo loo oggolaaday dadka ka yar 18 jir waqti xaadirkaan.
Cunugayga miyuu u baahan doonaa garoojada xoojinta ah?
Hadda, kuurooyinka xoojinta waxaa lagula talinayaa oo kaliya dadka da'doodu tahay 5 sano iyo ka weyn. Dadka da'dooda ay tahay 17 sano iyo kayar waxaa kaliya ay u qaadan karaan tallaalka Pfizer kuuradooda xoojinta ah.
Immisa kuuro ayuu canugeyga u baahanyahay?
Dhammaan carruurta waxaa lagula talinayaa inay qaataan ugu yaraan 2 qaadasho/kuuro oo tallaalka ah. Qaadashooyin/kuurooyin dheeraad ah ayaa lagula talin karaa si loo tixgeliyo kuwii u dambeeyey.
Caruurta da'doodu tahay 5-11 sano ha qaataan kuurada tallaalka caruurta, taasoo ka kooban qadar/cadad kaduwan kuwa nooca dadka qaangaarka iyo kuwa waaweyn.
Caruurta da'doodu tahay 12-17 sano ayaa uqalma inay qaataan kuurada dadka qaangaarka/waaweyn.
Carruurta da'doodu tahay 5 sano ama ka weyn kuwaas oo si dhexdhexaad ah ama si daran uu nidaamka difaaca jirkoodu uu daciif u yahay waa inay qaataan qiyaas/doos dheeraad ah oo tallaalka aasaasiga ah 28 maalmood kadib marka ay qaataan qiyaastooda/dooskooda 2aad, carruurta da'doodu tahay 5 sano iyo ka weyn waa inay qaataan qiyaas xoojiye ah. Kuurooyinka dheeraadka oo kooxaha kale ah ayaa laga yaabaa in lagu taliyo mustaqbalka.
Fadlan dib u eeg tilmaamaha Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Xarunta Xakameynta iyo Kahortagga Cudurrada) dadka difaaca jirkoodu liito ama booqo webseedka DOH..
Yaan kala hadlayaa haddii aan qabo su'aalo kusaabsan tallaalka?
Kala hadal dhakhtarka daryeelka canugaaga ama bixiye caafimaad oo la aamini karo, kala hadal shaqaale qaabilsan caafimaadka bulshada, ama ka akhri macluumaadka kusaabsan halkaan www.CovidVaccineWA.org.
Tallaalka ay qaadanayaan ilmaha jra 5-11 sano miyuu lamid yahay tallaalka ay qaadanayaan kuwa jira 12+ sano?
Tallaalka Pfizer-BioNTech ee loogu talagalay ilmaha jira 5–11 sano waa isla tallaalki oo ka kooban maadooyin isku mid ah, laakiin ka kuuro/qiyaas yar, waa cabbirka saddex meelood-meel kamid ah tallaalka dadka waaweyn ay qaataan.
Wax soosaarka hadda jira ee loogu talagalay dadka waaweyn iyo kuwa qaangaarka ah waa in aanan loo isticmaalin carruurta jirta da'da 5-11 sano.
Halkee ayaan geyn karaa canugeyga si uu uqaato tallaalka?
Gobolka Washington waxa uu si bilaash ah ku bixiyaa dhammaan tallaalada lagu taliyey ee loogu talagalay carruurta illaa da'da 18 sano. Weydii daryeelaha canuugaaga ama rugtaada caafimaadka joogtada ah haddii ay bixiyaan tallaalka COVID-19.
Qoysaska aan durba haysan daryeel-bixiye caafimaad waxay wici karaan khadka caawinta ee Help Me Grow WA 1-800-322-2588 ama waxay booqan karaan websaydka ParentHelp123.org si ay u helaan daryeel-bixiye caafimaad, rug caafimaad, ama macluumaad kale oo la xiriira caafimaadka. Adeegaan waa lacag la'aan iyo caawimaada luuqadeedna waa la heli karaa.
Waxaad sidoo kale booqan kartaa VaccineLocator.doh.wa.gov oo aadna isticmaali kartaa filtarka si aad u aragto liiska meelaha kuugu dhow ee laga helo tallaalka carruurta.
Canugeygu ma qaadan karaa tallaalka COVID-19 markii uu qaato tallaalada kale sida kan hergabka?
Haa. Canugaadu waxa uu qaadan karaa tallaalka COVID-19 isla marka uu qaato tallaalada kale.
Miyaa looga baahnaan doonaa canugeyga tallaalka COVID-19 si uu ooga qeyb galo daryeelka carruurta ama xerooyinka maalintii ah?
Washington State Board of Health (kaliya ah Ingiriisi) ayaa go'aamiya nooca tallaalada looga baahan yahay iskuulada iyo xarumaha daryeellka caruurta. Majiro iskuul ama daryeelka carruurta oo shardi kadhigaayo tallaalka COVID-19 wakhtigaan.
Kaamamka/xerooyinka maalintii ah, ka hubi ururka maamulaya kaamka si aad u ogaato shuruudahooda waxa ay yihiin.